बिष्णु माझीको कुरा गर्दा यस्तो भन्छन माइती भाइ !! उनको गाएक बन्ने यस्तो सपना !!
झण्डै डेढ दशकदेखि लोकदोहोरी क्षेत्रमा सक्रिय गायिका विष्णु माझीले अहिलेसम्म हजारौं गीतमा आवाज दिएकी छिन् । उनको आवाज मन नपराउने र उनको आवाजको तारिफ नगर्नेहरु कमै भेटिन्छन् । प्रत्यक्ष रुपमा भेटेरै उनको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहेनहरु पनि थुप्रै छन् । तर विष्णुले आफ्ना प्रशंसकहरुलाई अहिलेसम्म यो मौका दिन सकेकी छैनन् । उनी मात्र स्टुडियो र घरमा सिमित छन् । विष्णुको जीवनशैली अचम्मको छ । उनी आफ्नै पारामा स्टुडियो आउँछिन् । गीत गाउँछिन् अनि घर फर्किन्छिन् ।
याम बहादुर नेपाली पनि संगीत क्षेत्रमा अगाडी बढ्न चाहाना लिएर अगाडी बढिरहेका छन् । उनले अहिले सम्म दुइ ओटा गीतहरु रेकर्ड गरिसकेका र एउटा गीतको भिडियो भने सार्बजनिक भैसकेको बताएका छन् । उनि २०७३ सालमा गण्डकी तारा पनि भएका थिए । प्रसङ्ग अनुसार विष्णुको माइत गाउका भाई
याम बहादुर नेपाली संग २/४ ओटा प्रस्न गर्ने जमर्को गर्यौ तर उनलाई पनि भित्रि कुरा थाहा नभएको बताएका छन् ।
हेर्नुहोस बिष्णु माझीको कुरा गर्दा यस्तो भन्छन माइती भाइ !! उनको गाएक बन्ने यस्तो सपना !!
बिष्णु माझी सार्वजनिक नभए म अनसन बस्छु भन्दै नरनाथको आक्रोश हुँदै खुलाए बिष्णुको यस्तो रहस्य – भिडियो सहित
बिष्णु माझी मुख छोपेर हिडनुको रहस्य खोले दोहोरी च्याम्पियनका बिमा कुमारी र सुरेन्द्र मगरले, नागोले राती राती फोन गरेपछि हैरान भए सुरेन्द्र हेर्नुहोस